Why Israel Travelers are in love with Jamaica? A tourism trend developing | eTurboNews | Dị | Njem Akụkọ Banyere Na ntanetị
Kedu ihe kpatara ndị njem Israel ji nwee ịhụnanya na Jamaica? Omume ime njem na-etolite
Onye na-abụ abụ Jamaica, Anthony B, were Israel egwu mgbe ọ na otutu ndi egwu ndi ozo mere ememe nke reggae icon Bob Marley n'oge na-adịbeghị anya! O yi ihe olu nke nwere mkpụrụ okwu Hibru “chai,” nke pụtara ndụ.
Keith Blair, nke amara aha Anthony B, bụ onye Jamaica deejay na onye otu Rastafari.
Njikọ ọhụrụ a dị ọhụrụ n'etiti Jamaica na Israel ka emesiri ike n'izu gara aga mgbe Hon. Edmund Bartlett bụ onye minista ama ama na-ahụ maka njem na Jamaica gara Ala Nsọ.
Akwụkwọ akụkọ Israel I24 News kwuru na egwu Jamaica na Jamaica na-enye Israel na Middle East niile olileanya maka ụzọ dị mma karị iji "gbakọta ma dịkwa mma."
Omenala, Egwu na njem nlegharị anya jikọtara ọnụ.
O nwere ike ịkọwa ihe mere ụmụ Israel ji enwe mmasị ịbịa Jamaica. Omume ohuru a bu ohere diri ndi nwere oke njem njem na mba abuo.
Jamaica nwere ihe ọ ga - ewe iji bụrụ ebe ezumike kachasị amasị ndị njem Israel. Njem nlegharị anya nwere ike ịmalite ịkọ akụkọ ịhụnanya na nnukwu azụmahịa. Onye Minista na-ahụ maka njem nleta na Jamaica n'izu gara aga kwurịtara banyere itinye ego Israel na Jamaica.
Jamaica na Israel abụghị naanị njikọ miri emi na Akwụkwọ Nsọ ndị Juu na-arụ ọrụ dị mkpa na egwu reggae kemgbe ọkara narị afọ gara aga. Yabụ na Israel bụkwa ebe zuru oke ịsọpụrụ ihe nketa Bob Marley.
Israel kwadoro nnukwu egwu "Otu ”hụnanya" iji mee emume ncheta ọmụmụ 74th nke mbubreyo Bob Marley, onye nyefere ndụ ya n'ịgbasa ozi udo na nkwekọ n'etiti mmadụ.
Anthony B bụ onye gbara ọkpụrụkpụ n'ime ụwa reggae ruo afọ iri atọ, Anthony B atụfughị ​​ohere ịtụ ụtụ maka Marley ma kpoo vibes na Ala Nsọ.
Anthony B doro anya na ọ bụ ọrụ nke onye nnọchi anya udo njem nlegharị na ijikọ Israel, egwu reggae, na ike egwu.